Xa i-Spark yakho ixhuma i-Wells Gcwalisa ngeoli
Ukulungisa i-Oil-Filled Spark Plug Wells
Ingaba Ingxaki Ifuna Isisombululo Sangoko?
Xa i-spark plug igcwalisa kakuhle ioli, ithetha ukuba i-O-ring ebeka uphawu lweplaski kakuhle kwaye igcina ioli iphelile kwaye iqala ukuvuza, nangona ikhefu linokuthi lugcinwe ngokuqiniswa kwe-bolves cover bolts. Nangona kunjalo, ngokuphindaphindiweyo kunoko, i-valket cover valket kunye neempawu ezifanelekileyo ziza kufuneka zitshintshwe ukuba ioli iyindawo yeeplastiki.
Ingxaki engaphendulwanga njengaye iya kubangela ukuba i-spark plug iqhube kwaye iholele ekuqhubikeni kweenjini, ngokuqinisekileyo iya kubangela ukuba inzondo iqhube ukusebenza kwaye mhlawumbi ingabangela ukuba injini yomlilo iqale; Kubalulekile ukuba lo mbandela uphawuleze okanye uzilungiselele ngokukhawuleza xa uwufumanisa ukuze ugweme umonakalo owenzela wena okanye isithuthi sakho.
Iimoto ezincinci zixhomekeke ekuvukeni kweoli, ngoko kubalulekile ukwazi oko kukhangeleka xa uhlola apho ukuvuza kuvela khona, nangona indawo efanelekileyo yokuqala ngokuqhelekileyo ihlolisise ukuba ingafaki i-valve isembozo kufuneka ithathe indawo.
Ngexesha lokubeka indawo yakho ye-Spark Plug Wells yakho
Kubalulekile ukugcina engqondweni ukuba akusoloko kuyimfuneko ukuba utshintshe iplagi yakho iplastiki ngokupheleleyo. Izihlandlo ezithatha indawo ye-valve, ngokukodwa isembozo, kuya kulungele ukulungisa iplaski egcwele ioli.
Ukuba i-gasket ayifaki ukutywinwa kwi-spark plug kakuhle, mhlawumbi iya kuvuza i-oyile kule ndawo, eya kuthi idityanise kwaye ekugqibeleni idale iingxaki kwinjini. Nangona le nto iyona nto ibangelwa yinkinga, i-piston engaphumelekanga okanye izikhokelo ezivuthayo zingabangela le nto, ngoko umatshini wakho kufuneka aphenye nabo.
Ngokufanelekileyo, wena okanye umatshini kufuneka uhlole i-valve, i-O-ring seal, i-piston, i-piston, kunye ne-valve guides ukulawula naluphi na umonakalo ongaphezulu komgca we-valve seal.
Kubalulekile ukuphatha le ngxaki ngokukhawuleza ukukhusela iingxaki ezinokubangela, ezibandakanya umonakalo obulalayo kwinjini. I-oyile kwi-spark plug ingenza umonakalo omkhulu kwimimandla eyahlukeneyo yemoto, njenge-warping okanye ukuphula iiphini kunye neepiston okanye ukutshabalalisa i-gasket yentloko engakhokelela kumlilo wenjini.
Ezinye iiNgxaki ezithinta i-Effect Spark ifake i-Output
Nangona i-spark plug izitshalo ezizaliswe ngeoli ziyimpikiswano evamile, kukho iintlobo ezahlukahlukeneyo ezinokubangela ukungonakali kwi-injini, ngokukodwa njengoko zihambelana ne-spark plugs kunye nezixhobo ezidibeneyo.
Iifowuni ze-spark, umzekelo, zinokudiliza kwiindlela ezahlukeneyo eziza kubangela ukuba i-Intelligent Check Check light ifike. Kufuneka uhlolisise iifowuni zeeplaski zakho zee- spark zokuqhawulwa rhoqo kwixesha eliqhelekileyo njengoko oku kungakhokelela ekugqibeleni kunye ne-spark ebuthakathaka okanye kungabikho nantlinkle, ekugqibeleni kukuchaphazela i-gas mileage.
Ngokuqhelekileyo, oku kuya kufuna ukutshintsha iifowuni zeflask yakho , okufuneka ukuba kwenzeke zonke iikhilomitha ezingama-30 000 kungakhathaliseki ukusebenza kweenjini - ukuba utshintshe i-spark plugs, cinga ukutshintsha iifowuni ngexesha elifanayo.
Indlela yokuKhusela iSebenza njani?
Indlela yokulungisa i-Wheel Shimmy
Izizathu zokuthi I-Car Your Speed ​​Speed ​​ingaba yinto ephakamileyo
Indlela yokucoca i-ABS yakho ye-Wheel Sensor
Indlela yokulungisa inkqubo yokuKhutshwa kweRattling kunye noTystened Bolt
Yintoni ephumayo phantsi kweMoto yam?
I-P1320 iNissan Misfire Service Bulletin kunye neWaranti yakho
Yenza Iinguqu Zakho Zamafutha
Udwebo lwe-Pastel I-Step-by-Step-Step-Step-Demonstration
Lapho Ufanele Uhambele Ngokweenkcukacha Zenkwenkwezi
Iimpawu zokugqibela zesiJamani Zeichensetzung Iimpawu zoPhuculo lwePhulophu Icandelo 1
I-Cotton Gin no-Eli Whitney
Okulungileyo nokubi koLwazi lokuLoba ngeBraid
Iingcebiso ezilishumi elinambini xa ilanga lihlala eGemini
I-Chaco Canyon - Intliziyo Yomsebenzi we-Ancestral Puebloan People
UBenjamin Disraeli: I-Novelist ne-British Statesman
Abaculi kunye ne-copyright: Iipayili ezivela kwiifom zeefowuni
Funda ngobuThixo bamaHindu uShani Dev
Yintoni ongayifaki kwiKharityhulam yeeKharityhulam (CV)
I-Soft-Rock eyingozi kakhulu: Isonka (I-Band)
EFrentshi, Ngaba Uyiva Nge 'Pépère'? Nantsi Oko kuthetha
I-Crash yaseHorseshoe, i-Arthropod yamandulo eyayisindisa ubomi
I-Basic Skateboard Tricks
Ukufunda nokuCwangcisa iifayile ze-XML (i-RSS feeds) kunye noDelphi
UZheng He, iMing China Great Admiral
Imfazwe Yehlabathi II: USS Lexington (CV-16)
Rift Valley - I-Great Rift Valley yaseMpuma Afrika
Umnxeba Omnye weLiners nguRudney Dangerfield
Ukujonga ngaphakathi ngaphakathi kweTonya Harding-uNancy Kerrigan Umfanekiso we-Skating Scandal